'चुनाव जित्न दलहरूले जे पनि गर्न थाले'- भिडियो - कान्तिपुर समाचार
'चुनाव जित्न दलहरूले जे पनि गर्न थाले'
स्थानीय तह निर्वाचनका चुनावी प्रचारप्रसार अन्तिम चरणमा पुगेको छ । विगतमा जस्तै यसपटक पनि प्रचारप्रसार भड्किलो भइरहेको छ । दलहरूबीचको प्रतिस्पर्धा निष्ठा र सिद्धान्तभन्दा बाहिर उत्रेर भइरहेको छ । विगतको चुनाव र अहिलेको अवस्था कस्तो देखियो ? निर्वाचनमा देखिएका विकृति कसरी सुधार गर्न सकिन्छ ?
काठमाडौँ — स्थानीय तह निर्वाचनका चुनावी प्रचारप्रसार अन्तिम चरणमा पुगेको छ । विगतमा जस्तै यसपटक पनि प्रचारप्रसार भड्किलो भइरहेको छ । दलहरूबीचको प्रतिस्पर्धा निष्ठा र सिद्धान्तभन्दा बाहिर उत्रेर भइरहेको छ । विगतको चुनाव र अहिलेको अवस्था कस्तो देखियो ? निर्वाचनमा देखिएका विकृति कसरी सुधार गर्न सकिन्छ ?
यसै विषयमा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलसँग ई-कान्तिपुरका दुर्गा खनालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश पूरा पढ्न : 'चुनाव जित्न दलहरूले जे पनि गर्न थाले'
प्रकाशित : वैशाख २७, २०७९ २१:२६